hatrany amin’ny 60 miliara Euros isam-bolana ny fatiantoka vokatry ny fihibohana an-trano. 5,7 tapitrisa ny mpiasa tsy maintsy niato tamin’ny asany araka ny fanadihadiana nataon’ny sampam-pikarohana OFCE any an-toerana. Ny any Etazonia ihany koa dia tsy mitsahatra mitombo ny isan’ireo tsy miasa ankehitriny ary miaina anaty krizy tanteraka ny firenena Amerikana. Misy mihitsy ny drafitra novolavolain’izy ireo mahakasika ny fitotonganan’ny orinasa mba hijerena manokana ny vahoaka indrindra manoloana ny fahaverezan’asa marobe. Tsiahivina fa efa mihoatran’ny 100 000 ireo voan’ny aretina coronavirus any Amerika amin’izao fotoana izao ary efa nihoarany indray aza Sina sy Italia. Mahakasika ny Harinkarena faobe dia manary isa 30 (30 points) isam-bolana i Frantsa taorian’ny fepetra tsy fivoahana an-trano izay manome fatiantoka 2,6% isan-taona. Anton’izany ny fitotonganan’ny fanjifan’ny isan-tokantrano, ny fahapotehan’ny sehatra fandraharahana sy ny asa famokarana rehetra. Manampy trotraka ny krizy manerantany ihany koa ny fidarabohan’ny sehatra fizahantany izay manary vola amina miliara maro isam-bolana. Tsy maintsy ho mafy ny fiantraikany eto Madagasikara ary andrasana ny akon’izany rehetra izany. Saingy maika kosa aloha ny fiarovana ny ain’ny vahoaka ary ilaina ny fanarahana ny fepetra apetraky ny fitondram-panjakana.